फरक संस्कृति र विविधतामा बाँचेको जापान – Nepal Sandesh
फरक संस्कृति र विविधतामा बाँचेको जापान
जापान एशिया महाद्वीपमा अवस्थित एक विकसित देश हो । जापान चार वटा ठुलो र अनेक साना द्वीपहरु बाट बनेको एक समूह हो ।
यो द्वीप एशियाको पूर्वमा रहेको समुन्द्रतट अथवा प्रशान्त महासागरमा अवस्थित रहेको छ ।
जापानको छिमेकी राष्ट्रहरुमा चीन, कोरिया र रुस पर्छन् । जापानीहरुले आफ्नो देशलाई निप्पोन भन्ने गर्छन् जसको अर्थ सुर्योदय भन्ने हुन्छ ।
जापान की राजधानी टोकियो हो भने त्यसको अन्य ठुला महानगरमा योकोहोमा, ओसाका र क्योटो पर्दछ । जापान लगभग ६८५२ द्वीपहरु मिलेर बनेको छ तर त्यस मध्य केवल ३४० द्वीपहरु मात्र १ वर्ग किलोमिटर भन्दा बढी क्षेत्रफलमा फैलिएका छन् ।
यस मध्य केवल चार द्वीप मात्र यसको क्षेत्रफलको ९७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ भने बाँकी रहेका ६८४९ ले ३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् ।
१.जापानको ७० प्रतीशत हिस्सा पहाड़ी रहेको छ र त्यसमा २०० ज्वालामुखी पनि रहेका छन् ।
२. जापानको तैसीरोजिम्मा द्वीपलाई क्याट टापु भनिन्छ । यस द्वीपमा कुकुर पाल्न मनाही गरिएको छ । तर यहाँ जम्मा मानिसको संख्या १०० छ भने विरालोको संख्या भने मानिसको संख्या भन्दा चार गुणा बढि रहेको छ ।
३. जापानमा जनवरी १ मा नववर्षको स्वागतको मन्दिरमा १०८ घण्टि बजाएर गर्ने गरिन्छ ।
४. ‘फुगु’ जापानको लोकप्रिय खाद्यपदार्थ मध्ये एक हो । यहाँ एक विषालु माछालाई पकाइने गरिन्छ ।यो माछालाई पकाउनको लागि लाइसेन्स लिनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस प्रकारको माछालाई ग्राहकलाई दिनु अगाडी चाखेर मात्र दिने गरिन्छ । यस प्रकारको लाइसेन्स लिनु अनिवार्य, रहेको छ ।
६. जापानमा १० वर्ष उमेरसम्मका बालबालिकालाइ कुनै परिक्षामा सामेल गराइर्दैन । जापान १०० प्रंतिशत मानिस साक्षर रहेका छन । यहाँको अखबारमा कुनै प्रकारको दुर्घटना, राजनिती वादविवाद फिल्मी समाचार छापिदैन । त्यहाका अखबारमा आधुनिक जानकारी तथा अन्य आवश्यक समाचार छापिने गर्दछ । सुमो जापानको लोकप्रिय खेल हो । यो बाहेक जापानमा वेशवल पनि विषेश खलको रुपमा लिइन्छ ।
१०. जापानमा शिक्षक तथा विद्यार्थी मिलेर कक्षाकोठाको सरसफाइ गर्ने गर्दछन ।
११. जापान चारैतिरबाट समुद्रले घेरिएको भएता पनि २७ प्रतिशत माछा अन्य देशबाट आयात गर्ने गरिन्छ । जापानी नागरिकका औषत आयु संसारकै सबभन्दा बढि ८२ वर्ष रहेको छ ।
जापानका अन्य रोचक कुराहरु
जापानमा भेन्डिङ मेशिनमा सिक्का हाल्दा त्यस मेशिनबाट आवश्यक सामान निक्लने गर्दछ । यस प्रकारको मेशिन जापानको हरेका सडकमा यस प्रकारको मेशिन राखिएको हुन्छ ।
मुशलमानलाई नागरिकता दिने एक मात्र राष्ट जापान हो । जापानमा मुशलमान नागरिकलाई भाडामा कोठा दिनको लागि समेत इँन्कार गर्ने गरिन्छ ।
जापानमा सन २०११ को ११ मार्चमा आएको भुकम्प विश्वकै सबभन्दा ठुलो भुकम्प हो , जापानमा हरेक वर्ष १५०० भुकम्प आउने गर्दछ ।
जापानमा ह्वेल माछाको शिकार गर्ने गरिन्छ तर यस प्रक्रियालाई अन्तराष्टिय मापदण्डले रोक लगाइएको छ । जापानमा माफी जनाउनको लागि २० भन्दा धेरै प्रक्रियाको प्रयोग गरिन्छ ।
जापानमा आत्महत्या गर्ने मानिसको संख्या एनडोरा पछि कै कम रहेको छ । यस देशमा मात्र २ लाख मानिस मध्ये एकले मात्र आत्महत्या गर्ने गर्दछन ।
जापान परमाणु बमको हम ला भएको एक मात्र राष्ट्र हो यहाँ सन १९४५ को अगस्ट ६ र ९ मा अमेरिकाले जापानको हिरोशिमा र नागाशाकी मा लिटल म्यान र फ्याट बोइ नामका दूइ शत्तिशाली परमाणु बम हानेको थियो । जापानमा समयको अत्याधिक ख्याल राख्ने गरिन्छ । यहाँ रेल आउने समय १८ सेकेण्ड भन्दा ढिलो हुदैन । जापानमा प्रकाशित हुने पुस्तक मध्ये २० प्रतिशत कमिक पुस्तक हुने गर्दछन ।